War deg deg ah: Al Shabaab oo isaga baxay degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud – SBC
War deg deg ah: Al Shabaab oo isaga baxay degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud
Posted by editor on Agoosto 6, 2011 Comments
Wararka ka imaanaya degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud ayaa sheegaya in halkaasi ay isaga baxeen xoogaga Shabaabka ee halkaasi ku lahaa fariisinka weyn.
Qof ku sugan degmada Ceelbuur oo codsadey inaan magaciisa saxaafada laga sheegin sababo amaankiisa ku aadan ayaa sheegay in maleeshiyaadkii Shabaabka ee ku sugnaa degmada Ceelbuur ay halkaasi maanta isaga baxeen iyagoo gabi ahaanba ka guuray saldhigyadoodii ciidan ee degmada Ceelbuur.
Lama oga ilaa iyo haatan halka ay u aadeen xoogaga Shabaabka ee ku sugnaa degmada Ceelbuur waxaase la soo sheegayaa in u baxeen dhanka gobolada Koonfureed, waxaa jira warar sheegaya in ay u guureen gobolada Baay & Bakool.
Ka bixitaanka Al-Shabaab ee degmada Ceelbuur ayaa lagu tilmaamay inay tahay talaabo ka dhalatey ka dib markii ay kooxdaasi isaga baxdey guud ahaan magaalada Muqdisho, arintaasi oo u muuqanaysa guul balaaran oo u soo hoyotey dawlada KMG Soomaaliya.
Gamadiid Gaalodiid says:
Agoosto 6, 2011 at 10:43 pm
Tan iyo 1991 waxaa gacan ku haynta magaalada Muqdisho isaga danbeeyey maamullada kala ah: Maamulkii Siyaad Barre, Cali Mahdi, dowladdii Salballaar, xukuumaddii Cabdi Qaasim, maamulkii Qab-qablayaasha, nidaamkii Maxaakiimta, weerarkii Ethiopianka, maamulkii Al-shabaab iyo ugu danbaystii oo ay hadda gacanta ugu jirto saddexda qolo ee kala ah AMISOM & GFT & Suufiyo oo isla socda. Haddaba, su’aasha meesha taal waxaa weeye, saddexdaan qolo ee hadda Alshabaab ka saartay magaalada Muqdsho, qoladee ayaa loo malaynayaa in loogu hor-saari doonaa?. AMISOM waxay doonaysaa in iyada laga amar qaato. Suufiyaduna waxay doonayaan in ay dalka oo dhan xadro ku wareeriyaan. FTG-du waxay rabaan in ay wixii lacag ah ee soo dhaca iyagu cunaan. Sidee loo heshiinayaa?!!.
Agoosto 7, 2011 at 12:38 pm
walaalahayo shabaab puntland ha ku soo dhowaadaan anagaa nabad gelinaynee,ceel buur waxaa idinka saaray culimda ahlu sunah ,halkaanna waxaa idinku soo dhowaynaya culimo kale ,culimada maxaa kala haysta.muqdisho maxay uga guuren ma fitankeeda ayey ka baqeen walaaalayaal baydhabo taga oo is dejiya is urursada ka dibna kala taga .